Mgbasa ozi: Otu ndi ahia si merie agha maka nlebara anya ha | Martech Zone
Na nke a Epic, ga-ahụ ngosi, Hubspot na-enyocha akụkọ zuru ụwa ọnụ na mmalite nke mgbasa ozi iji kpughee otu usoro iheomume zuru ezu (ma nke a na-agbagha agbagha) nke mgbasa ozi mgbasa ozi dugara n'ọbara nke enweghị mmasị nke ndị ahịa, yana ihe ndị ahịa nwere ike ime banyere ya iji ruo ndị ahịa n'afọ ndị dị n'ihu.
Adala mba na ihe ngosi 472 - 29.39% nke ndi ahu rapuru nye ihe osise di egwu na ihe mmeghari ahu nke n’eme ka ikuku ghara igafe. Budata a free mbipụta nke ngosi a + usoro mgbasa ozi a na-ebipụta ebi.
Lee ihe iri abụọ na-adọrọ mmasị gụnyere:
Mgbasa ozi adịla kemgbe 3000 BC!
63% nke ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịnụ nkwupụta ụlọ ọrụ na-ekwu oge 3-5 tupu ha ekwere ya.
O yikarịrị ka ị ga-adị ndụ n'ụgbọelu ụgbọelu karịa pịa ọkọlọtọ mgbasa ozi.
Mgbasa ozi mbụ nke akwụkwọ akụkọ bụ na 1650 iji nye ụgwọ maka ịnyịnya 12 ezuru.
Waslọ ọrụ mgbasa ozi ọkachamara mbụ malitere na 1841 na Philly.
Mgbasa ozi mbụ ghọrọ ọzụzụ agụmakwụkwọ na 1900 na Northwest.
Unilever & JWT buru ụzọ mekọrịta na 1902, na-eke mmekọrịta kachasị ogologo na akụkọ mgbasa ozi.
Branddị usoro ụmụaka bụ onye mbụ nyere nkwado blimp (na 1902).
Agencylọ ọrụ mgbasa ozi izizi malitere ngwaahịa bụ JWT n'aha P&G na 1911, maka ngwaahịa ha Crisco.
E nyere ọkwa mgbasa ozi redio mbụ na 1922: $ 100 maka nkeji iri!
Na 1929, Lucky Strike jiri $ 12.3M mee ihe na mgbasa ozi, nke kachasị na akụkọ ntolite ruo oge ahụ iji kwalite naanị otu ngwaahịa.
Mgbasa ozi TV mbụ bụ maka Bulova Clocks & ruru 4000 TV.
Na 1946, US nwere ụlọ ọrụ TV 12. Na 2011? Bɛyɛ mfe 1,700.
Nkuzi oku abiala gburugburu ichoputa ndi nnochi anya kemgbe 1981.
Na 1993, intaneti niile nwere nde mmadụ ise - ma ọ bụ 5% nke ọrụ onye ọrụ Facebook ugbu a.
Onye nzipu ozi email mbụ bụ Canter & Siegel nyere iwu na 1994.
Na 1998, ndị na-azụ ahịa na-ahụ ozi mgbasa ozi 3,000 kwa ụbọchị.
Na 2009, FTC guzobere usoro dị iche iche na-egbochi ịgba ama ndị ahịa na-abụghị eziokwu.
Na 2011, enwere ihe karịrị 1 puku ijeri peeji nke ntanetị. Nke ahụ bụ peeji 417 maka mmadụ 1 ọ bụla!
Eric Schmidt nke Google kwuru na “Kwa ụbọchị abụọ, anyị na - ewepụta ọtụtụ ozi dịka anyị mere site na mbido mmepeanya rue 2.